Zvekutaura pachena. Vhura sosi dzimwe nzira kune Youtube | Linux Vakapindwa muropa
Muna 1984 Isaac Asimov akabvunzwa kuti anyore ongororo mubhuku raGeorge Orwell rezita rimwe chete. Asimov haana chaakawana chakanaka kutaura. Makore makumi matatu nematanhatu gare gare, Orwell anotaridzika semunyori wechiporofita uye munyori we Foundation mutsoropodzi anoona-pfupi. Asi, haisi mhosva yemudhara akanaka Don Isaac izvo Vatungamiriri vezana ramakore rechi1984 vakashandura XNUMX kuita bhuku remirayiridzo.
Tisati taenderera mberi, kujekeswa. Ndiri kunyora chinyorwa nezve tekinoroji neInternet, kwete nezvematongerwo enyikaKunyange chiri chokwadi kuti chinyorwa ichi chakazvarwa nekurambidzwa kwemaakaundi aDonald Trump akagadzirwa nemasocial media mapuratifomu (iwo mamwe anogamuchira nemufaro zvinangwa zvevadzvanyiriri veAsia kuti vasarasikirwe nemusika wavo), haisi dziviriro (kana attack) kuhurumende yako. Ini ndinongotenda kuti mune democracy, muganho wega wekutaura wakasununguka ndeuyo wakagadzwa neBumbiro nemitemo uye unongogona kushandiswa nemutongi.
Zvirokwazvo shoko alternativas inofanirwa kutorwa nezviyo zvemunyu. Hapana chimwe cheizvi kurudziro chine huwandu hwevashanyi kana akasiyana ezve YouTube zvirevo. Kana zvirambidzo zvawo.
1 Zvekutaura pachena. Dzimwe nzira kune Youtube
2 Dzoga-dzinozvigadzirira mhinduro dzekutaura kwemahara
Zvekutaura pachena. Dzimwe nzira kune Youtube
Kubatsira kukuru kwe sevhisi iyi zvichibva pane yemahara software ndeyekuti haina kuiswa pakatikana. Uchishandisa iyo tekinoroji yakafanana neiyo Torrent network, zvemukati zvinoyerera kubva kunzvimbo dzakawanda zvichideredza nguva yekurodha pasi uye zvinokanganisa. PeerTube inowirirana neActivity Pub, federated protocol inobvumidza kudyidzana nemamwe masevhisi anoenderana.
Chinhu chakanakisa pane zvese zvinopihwa naPeerTube ndechekuti iwe unogona kusarudza pakati pezviitiko zvinoverengeka zvinoenderana nezvaunoda uye zvaunoda kana kugadzira yako.
Rimwe basa rehutongi chete Panzvimbo pekushandisa Torrent tekinoroji, inoshandisa Blockchain. Zvakare, pachinzvimbo cheshambadziro, inopa iyo yayo cryptocurrency yekupa mubairo vagadziri.
Asi, chokwadi chinogona kunge chisiri chakanaka sechivimbiso. Nharaunda inogona kusarudza kudzima mavhidhiyo. Uye isu tatoziva kuti vashoma vanokurudzirwa vanowanzo kuve nesimba rakakura munharaunda kupfuura ruzhinji. Kana zviri zvemusiki mubairo, iwe unofanirwa kugadzira kushoma kwekushanya muvhiki yekutanga.
Mupfungwa iyoyo PeerTube ine mukana wekuti iwe ugone kushandisa yako wega zvipo zvekubatsira.
Mune ino kesi isu tine chimiro zvakawanda zvemukati. Inotsigira mavhidhiyo, mumhanzi, ebook uye mamwe marudzi ezvinyorwa. Uchishandisa protocol yezita rimwe chete. Vagadziri vanogona kurodha basa ravo kunetiweki yekutambira, kuseta mutengo wekutepfenyura kana kurodha pasi, kana kutendera kuti zviitwe mahara.
Dzoga-dzinozvigadzirira mhinduro dzekutaura kwemahara
Dzimwe nzira dziri pamusoro dzinokutendera iwe kushandisa echitatu-bato maseva kana kuzvimisikidza-wega. Dzinotevera ndeimwe nzira yakatenderedza. Izvo zvakagadzirirwa kuti zviitwe-yega, kunyangwe paine avo vanoisa maseva avo kuitira kuti vamwe vagone kuashandisa.
Chikamu cheiyo GNU chirongwa, ichi zvemukati maneja kwete chete inotsigira mavhidhiyo. Iyo inobatawo ebook, mharidzo, 3d mamodheru, uye ASCII art. Kana iyo sevhisi iyo yakachengetwa ine simba zvakakwana, iwe unogona kuita kuti iwanikwe kunharaunda kurodha yavo yega mavhidhiyo.
Ipuratifomu ine fomu yekutaura ine rutsigiro rweMarkdown.
Sezvinoreva zita iri chikuva ichi kuzvibata pachako kwakanyorwa muPython (kungoseka). Kufanana nemamwe akawanda akavhurwa sosi mapurojekiti, inoteedzera iyo modhi yevanotengesa zvinodhaka. Iyo inokupa iwe hwaro rwemahara, asi kana iwe uchida mawedzero ane zvimwe zvinonakidza maficha, iwe uchafanirwa kuenda ku Checkout (uye hazvizove zvakachipa).
Zvakakomba, pamwe iwe unofanirwa kufunga kubhadharisa mutengo wakaderera pakukopa uye kusanganisira zvese maficha pane kuda kudzoreredza mutengo wekuvandudza nekutengesa plugin
Pamapuratifomu atinotaura, Zvinotaridza kunge ndizvo chete zvinowedzera kutepfenyura mavhidhiyo akatambirwa zvinokutendera kuti uite nhepfenyuro dziripo Zvimwe zvinhu zviviri zvinonakidza zviri iko kugona kupinza uye kushandura mavhidhiyo kubva kumabhizinesi masevhisi uye nhare-inoshamwaridzika interface.
Nezve kuita mari, unogona kushandisa Google Ads kana kutengesa yako vhidhiyo kushambadza kuti iratidzwe pamberi pechinhu chakasarudzwa nemushandisi.
Iko kunyorera kune rutsigiro rwemakero akasiyana uye inotsigira zvinyorwa zvekunyorera uye kunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvekutaura pachena. Dzimwe nzira dzekuona mavhidhiyo ayo YouTube asingade kukuratidza
Rakanaka kwazvo giredhi. Ndatenda nekugovana izvi. Ini ndakatsamwa zvikuru paYouTube sezvo iri kugadzirisa mavhidhiyo mazhinji andinowanzo tarisa.